Why do we lose motivation during our learning journey?
လေ့လာရင်း Motivationကျလာရတဲ့ အကြောင်းရင်း
“The time most people quit”
“Learning time and Motivation”
"Sense of accomplishment and failure"
“Learning comprehension does not always increase ataconstant rate. The longer the period of learning is, the faster the understanding becomes.”
Hermann Ebbinghaus,aGerman psychologist
Language or Toolတစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လေ့လာတဲ့”ကြာချိန်”ကို မှတ်သားထားရပါမယ်။
Self-learnerတချို့က လေ့လာရင်းနဲ့ လမ်းခုလပ်မှာတင် အားလျှော့သွားကြတယ်။ လုပ်နေရင်းနဲ့ အချိန်လပိုင်းလောက်ကြာလာတာတောင် ဘာမှမယ်မယ်ရရ မတတ်သေးဘူးလို့ တွေးမိသွားကြလို့ပါပဲ။ ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆို learning curveရဲ့သဘောကို နားမလည်သေးလို့ပါ။
ကျနော်တို့ မသိစိတ်မှာ ထင်တာက လေ့လာရင် လေ့လာသလောက် တဖြည်းဖြည်း တတ်မြောက်တဲ့ပမာဏကလည်း proportionallyတိုးလာမယ်လို့ ထင်ကြတာ။ တကယ်က လေ့လာချိန်နဲ့အညီ တတ်မြောက်မှုက အချိုးကျတိုးမလာပါဘူး။
လေ့လာတဲ့ကာလရဲ့ အစောပိုင်းအချိန်(early phase)မှာ (conceptတွေတစ်ခုချင်းသိလာတာမှန်ပေမယ့်) အလုပ်ဖြစ်အောင်ထိ စုစည်းတတ်မြောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ knowledgeသေးသေးလေးတွေပဲ စုလာတာ။ အဲ့အပိုင်းကိုကျော်ပြီး စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဆက်လုပ်မှ နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ ရှေ့ကသိထားခဲ့တဲ့ knowledgeတွေက puzzle pieceလေးတွေ ဆက်လိုက်သလို တစ်ခါတည်းရုပ်လုံးပေါ်သွားတာမျိုးပါ။
လူတော်တော်များများ quitလုပ်သွားတာကလည်း ဒီမတိုင်ခင် ကပ်ရပ်အချိန်လေးမှာပါပဲ။ ဒီသဘောတရားလေးကို မသိတော့ လက်ရှိအားမရဖြစ်နေတဲ့ မသိစိတ်ကို တကယ်မဖြစ်မြောက်တာလို့ထင်ပြီိး ဆက်မလုပ်ကြတော့တာ နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။
ခက်တာက အဲ့ဒီearly phaseကပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ motivationတွေအမြင့်ဆုံးအချိန် ဖြစ်တတ်တော့ လုပ်နေသလောက် ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့အသိက စိတ်အားလျော့စေတာပါပဲ။
နောက်တစ်ခုသိသင့်တာက လေ့လာတဲ့ကြာချိန်နဲ့ motivationကြားက ဆက်စပ်မှုပါ။
ကျနော်တို့ တစ်ခုခုစလေ့လာပြီဆို အစပိုင်းက အခက်အခဲအမြဲတမ်းရှိတတ်ပါတယ်။ လုံးဝအသစ်ဆိုတာတွေ မှတ်သားရတာမို့ပါ။ ဒီတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာထက် ရက်အနည်းငယ် ပိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် မလေ့လာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ် ရက်ကြာကြာနားလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ် အများကြီးပိုကြာသွားတာမျိုး မဖြစ်ဖို့တော့သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုcareerတစ်ခုဖန်တီးပေးမယ့် ပညာရပ်တွေသင်နေတာဆိုတာကို သေချာခေါင်းထဲထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်သလိုမျိုး အလေးအနက်ထားမှ consistentဖြစ်မှ အချိန်တွေwasteမဖြစ်ဘဲ တတ်မှာပါ။
ကျနော်တို့ ဦးနှောက်က successနဲ့ failureကို သေချာမှတ်သားလေ့ရှိပါတယ်။ Languageတစ်ခုကို အချိန်တစ်ခုကြာလို့မှ သိသာတဲ့resultတစ်ခု ဖြစ်မလာရင် ဒါဟာfailureဆိုတဲ့ senseကို ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ထိတွေ့ဖို့ လက်ရွံ့သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ နည်းနည်းလောက်လုပ်ဖူးပြီးမတတ်လိုက်တဲ့ လူတွေက လူသစ်တွေထက် web developmentကို ပြန်လုပ်ဖို့ စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းသွားကြတာပါ။
ဒီတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ time frameအတွင်း (အများကြီး တွေးစရာမလိုပါဘူး ကိုယ်လေ့လာမယ့်courseကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းဖို့ပါ) တတ်အောင် ပုံမှန်လေးလေ့လာပါ။ အဲဒါထက် အချိန်တွေအများကြီး ပိုကြာသွားရင် failureတစ်ခုလို့ ဦးနှောက်ကမှတ််ယူမယ်။
Failမဖြစ်ဘူး တတ်သင့်သလောက် တကယ်တတ်သွားတယ်ဆိုရင် sense of accomplishmentဆိုတဲ့ successကို ဦးနှောက်ကသိလိုက်ပြီး နောက်ထပ်ဆက်လေ့လာဖို့ motivationတွေအများကြီး ထပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ 😉
Conclusionအနေနဲ့ ပြန်ပြောရရင် လေ့လာချိန်မကြာသင့်ဘဲ ကြာလာတာနဲ့အမျှ motivationဟာ ကျလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ ငါတော့ ဒီဟာနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးလို့ မသိစိတ်မှာဝင်သွားပါတယ်။ အဲဒီအတွေးဝင်တာနဲ့ ကိုယ်ဟာလက်လျှော့ချင်စိတ်ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်လေးလေ့လာပါ။ topicတွေကို randomမဟုတ်ဘဲ roadmapလေးတစ်ခုအတိုင်း အစီအစဥ်တကျလေ့လာပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂ရက်လောက်တော့နားပါ။ ဒါပေမယ့် မလိုအပ်ဘဲ စိတ်မပါတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ပိတ်ရက်တွေ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်မပစ်လိုက်ပါနဲ့ 😃။ ပြီးတော့ အချိန်ကြာတိုင်း အများကြီး တစ်ပါတည်းတတ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ pointတစ်ခုကိုရောက်မှ ပေါင်းစည်းပြီးတတ်သွားမှာဆိုတာလေး သိထားပါ။
ဒါဆို စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ လမ်းပျောက်တာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ Motivationတွေပျောက်သွားတိုင်း ဒီစာလေးပြန်ဖတ်ပြီး အားပြန်တက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
That’s all for now guys. Haveacomfortable learning journey!
©2022 Caleb's Blog